Ny fomba fifandraisana amin'Andriamanitra
"Tandremo mba tsy hanao ny asan’ny fahamarinanareo eo imason’ny olona hahitany izany; fa raha tsy izany, dia tsy manana valim-pitia amin’ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo. Koa amin’izany, raha manao fiantrana hianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon’ny mpihatsaravelatsihy eo amin’ny synagoga sy eny an-dàlambe mba hankalazan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa hianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon’ny tananao ankavanana, mba hatao ao amin’ny mangingina ny fiantranao; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. Ary raha mivavaka hianareo, aza mba ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy; Fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin’ny synagoga sy eo an-joron-dàlana hahitan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa hianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin’ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka hianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa; Fa ataony ho ny hamaroan’ny teniny no hihainoana azy. Koa aza manahaka azy hianareo; fa fantatry ny Rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza hianareo. Koa amin’izany mivavaha toy izao hianareo: Rainay Izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao et? an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadisoan’ny olona hianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo Izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan’ny olona hianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny Rainareo." Matio 6:1-15
Ny miseho sy ny miafina. Ny lalàn’i Mosesy dia voasoratra tamin’ny vato ivelany fotsiny fa ny Filazantsaran’i Jesosy Kristy kosa dia voasoratra ao am-po mihitsy (2 Korintiana 3:3). Ny fijanganjangana ety ivelany no melohin’ny Testamenta taloha fa melohan’ny Tompo sahady kosa izay miafina ao anatin’ny olona (Matio 5:28). Ny fanompoana atao hahazoana sitraka amin’olona (1) dia valim-pitia avy amin’ olona ihany no ho azony (2b,5b) ka ny asa soa (2) sy ny hetsika ara-panahy (5) izany dia mila atao ao amin’ny mangingina fa ny Ray no mahita izany (3:4, 6). Toe-po anefa no tena katsahan’ny Tompo eto satria sitrany koa ny fanompoana mibaribaribary iaraha-manao amin’ny hafa.
Ilay vavaka malaza nampianarin’ny Tompo. Mampiray ny vahoakan’Andriamanitra sady modely ity vavaka ity. Ny fankalazana ny Ray (9) sy ny fikatsahana ny sitrapony (10) no tokony mialoha ny fangatahana ny zavatra ara-nofo (11). Ilaina koa anefa ny mivavaka mba handresena ilay ratsy (13)sy hahazoana famelankeloka (12). Inona kosa re no miseho raha tsy avelan’ny Ray ny helok’izay tsy mamela ny heloky ny hafa (14-15) ho an’ny olona efa nohamarinina tamin’ny finoana (Rômanina 4:5)? Tsy fananana fiadanana ve sa fikatsoan’ny asan’Andriamanitra iandraiketana? Ny valin’ny fanontaniana tsara indrindra dia ny mankatoa izay voalazan’ny Tompo, ka mamela ny helok’ireo izay mbola tsy navelatsika .
Ahoana ny fomba fivavako? Mety mahazatra ahy ny mamerina tsy tapaka ny vavaka nampianarin’ny Tompo kanefa raha tsy misy fampiharana izany dia tsy mifankaiza amin’ny vavaky ny jentilisa ihany (7-8).